Global Voices teny Malagasy » Ahoana Ny Hoavin’ny ‘Kilelo Wikipedia’ Ao Amin’ny Vola Vaovaon’i Kazakhstan? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Janoary 2018 4:44 GMT 1	 · Mpanoratra Akhal-Tech Collective Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kazakhstan, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Saripika, Toekarena sy Fandraharahàna, Zavakanto & Kolontsaina
Saripika  avy amin'i Marcel Burkhard (User:Cele4). CC 2.0.
Azo antoka fa ratsy tokoa ny fandehan-javatra rehefa miezaka ny miala bala amin'ny fisian'ny fanitsakitsahana zon'ny mpamorona amin'ny fanazavana momba ny vorona ny solontenan'ny fahefan'ny banky foibe ao Kazakhstan.
Manitrikitrika  i Marcel Burkhard, Soisa mpakasary iray, fa dika petaka tamin'ny sary nalainy efa folo taona mahery izay ny sarimborondrano kilelo hita amin'ny vola taratasy 500 tenge ($1,50) vaovao Kazakh.
Hita  ao amin'ny wikipedia teny rosiana amin'ny lahatsoratra anondroana ny “kilelo” io sary io ary nopetahana marika ho “vorona kilelo fahita mahazatra”. Tsy manaiky fisian'ny fanitsakitsahana zon'ny mpamorona ny manampahefanan'ilay firenena aziatika afovoany hodidinin-tany izay be mpiteny rosiana na dia eo aza ny tabataban'ny media sosialy momba izany. Saingy niteny ry zareo taty aoriana fa hiova ny endriky ny vola “rehefa any aoriana any”.
Kisoritsoritry ny sary nopihan'i Burkhard sy ny sary nipoitra tao amin'ny vola taratasy 500 tenge. Sary nivoaka  tao amin'ny Zakon.kz sy ny media Kazakh hafa.
Nanoratra tao amin'ny Facebook toy izao i Burkhard tamin'ny 4 Desambra, araka ny fampitam-baovao Kazakh: On December 4, according to Kazakh media, Burkhard wrote on Facebook :
Nahazo hafatra avy amin'ny Kazakh iray mpisera media sosialy aho tamin'ny zoma, [izay nilaza] fa misy kilelo mitovy tamin'ny sary nalaiko amin'ny vola taratasy vaovao an'i Kazakhstan. Nandinika ilay vola taratasy aho ary, marina fa kilelo iray sy mitovy no hita. Tamin'ny nanaovana ny fampitahana dia nanety ny kilelo tamin'ny sariko aho ary nantsofoko teo amin'ny [dika mitovin'ny] vola taratasy izany. Mifanindry tsara avokoa ny antsipirihan'ny sary ka izany no antony itokisako fa sary iray sy mitovy tanteraka no resahintsika.
Niantso ny banky foibe Kazakh i Burkhard hanaiky amin'ny fanalana ny sarin'ilay kilelo mainty loha, na Larus Ridibundus, ary hanome karazam-panonerana ho azy.
Farafahakeliny iray ny sarin'ny kilelo hitan'ny Global Voices amin'ny paozy mitovitovy aminy , na dia mifanohitra amin'ny fitodiky ny vorona izay nopihan'ny Burkhard aza izany.
Saingy tsy misy amin'ireo vorona heverina ho valiny mipoitra ery ambony amin'ny karoka sary Google mitady Larus Ridibundus no misy itovizana betsaka tamin'ny sarin'ny vola 500 tenge tahaka ny sary nalain'i Burkhard tamin'ilay paozy ‘mora fantarina’.
Paozy iray ‘ahafantarana azy’
Nandritra ireo herinandro vitsivitsy nanaraka ny fampisehoana tamin'ny vahoaka ny vola taratasy 500 tenge no nilazan'ireo manampahefanan'ny banky foibe karazam-balinteny hanoherana ny filazana fa misy fanosihosena ny zon'ny mpamorona ao.
Raha iverenana ny tamin'ny volana Novambra, nantsoin'ny mpitondrateny Alexandr Terentyev ho “mivaona” ny tabataba manodidina  ity kilelo ity ary nampangainy ho mamoroporona ny mpisera Facebook.
Nampanantena ny mpanao gazety ihany koa izy fa hohararaotina ny fotoana hiarahana amin'ny manampahaizana manokana sy ny ekipa mpandravaka (haibika) ao amin'ny banky foibe “hilazana amin'ny antsipiriany momba ity kilelo ity, ny niaviany, ny paozin'ny elany, ny zoron'ny lohany”.
Manampahefana iray hafa tao amin'ny Banky indray nihevitra  fa “mampiavaka ny solontenan'io karazam-borona io avokoa ny fipetraka sy ny paozin'ireo vorona napetaka tamin'ny vola taratasy ireo.”
Tamin'ny 5 Desambra, raha mbola mivezivezy tsara ao amin'ny media sosialy ny fiampangana fangalaran-tahaka, nilaza  ny banky fa hiova “ao anatin'ny fotoana” ny endriky ny vola taratasy ary hosoritan-tanana mihitsy hisorohana amin'izay rehetra mety ho fanaovana hosoka ny saimbôlin'ny vola taratasy.
Tsy nisy anefa tamin'izany fotoana izany, fanamafisana teo noho eo amin'izay mety hanesorana amin'ny vola ny sarin'ilay kilelo.
Na dia ity vorona mpanakorontana ity aza no nanintona ny mason'ny mpisera media sosialy Kazakh, maro no mbola nitsiky kokoa raha nahita ny fomba idiran'ny ivom-pihariana iray antsoina hoe Moskva (Moskoa) ao Astana renivohitr'i Kazakhstan amin'ilay resaka vola taratasy 500 tenge.
Nanangam-bovona i Murat Abenov, minisitra lefitry ny fanabeazana teo aloha:
Fa hatramin'ny oviana moa i MOSKOA no mari-pirenentsika? Ahoana ihany koa no nahatongavan'io sary io ho eo amin'ny vola taratasy 500 tenge? Misolo tena ijoroan'ny maha-fanjakana antsika izany volam-pirenena izany…Fa ahoana ny natao[-n'ny banky foiben'i Kazakhstan] namela ity foibem-pihariana tsy miankina tantanin'olompirenen'ny Federasiona Rosiana ity ho tafiditra ao amin'ny volantsika?
Ny fahavinirana amin'ny vola taratasy vaovao amin'ny lafiny sasany dia mampahatsiahy ny fanoherana faobe tamin'ny fanavaozana ny lalànan'ny fizakan-tany halam-bahoaka  nivoaka tamin'ny taona 2016 sy ny tsi-fitoviankevitra tamin'ny fampidirana ny endritsoratra Latina hisolo ny endritsoratra Sirilika  tamin'ny fiandohan'io taona io.
Na dia tsy misy itovizana eo amin'ny antony sy ny vokany aza ireo fanafintohinana telo ireo, dia samy manasongadina ny tsy fahefan'ny manampahefana hanontany ny hevi-bahoaka mialoha ny hisosososoana amin'ny hetsika mampiady hevitra.
Amin'ireo mpitarika efa mahazo taona sy ny rafitra fehezin'olo-tokana tsy dia ahafahan'ny olom-pirenena manao domberina (feedback), dia tokony azo heverina ny mbola hisian'ny toe-javatra tahaka izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/01/30/111486/
 wrote on Facebook: http://www.zakon.kz/4892420-chayka-na-500-tenge-fotograf-poprosil.html#hcm=1512474708363939
 paozy mitovitovy aminy: http://www.ebirds.ru/bird/121.htm
 tabataba manodidina: http://www.ktk.kz/ru/news/video/2017/11/23/85036
 December 4, 2017: https://twitter.com/MuratAbenov/status/937657850024923136?ref_src=twsrc%5Etfw
 fanoherana faobe tamin'ny fanavaozana ny lalànan'ny fizakan-tany halam-bahoaka: https://globalvoices.org/2016/05/07/facebook-posts-tell-the-tale-of-a-kazakh-land-reform-furore/
 fampidirana ny endritsoratra Latina hisolo ny endritsoratra Sirilika: https://globalvoices.org/2017/11/04/how-does-your-name-look-according-to-kazakhstans-new-latin-alphabet/